Isixhobo esenziwe e-China segadi yeentyatyambo somzi weentyatyambo uMvelisi kunye noMthengisi | URuiyi
Nokuba ungumgadi wegadi onamava okanye ukhula nje, le kit kit yegadi ikulungele.
Ukungabinanto, ukunyathela, ukugoba, ukugoba, iwelding, ipolishi, isandblasting, ukutshiza, ukuhlolwa, indibano, ukupakisha, ukugqiba imveliso.
Ukukhuselwa kwezityalo kunye nokondliwa: Ukwehla kwendalo eluhlaza kunokonyusa isivuno sezityalo ngokubonelela ngendawo efudumeleyo nenesondlo. Ikwathintela iziphumo zemozulu egqithisileyo, ekuvumela ukuba ukhule izityalo ezingakhuli kakuhle kwindawo yakho. Unokukhetha iziqhamo kunye nemifuno ebusika unyaka wonke.
Ukungabinanto, ukunyathela, ukugoba, ukugoba, iwelding, ipolishi, isandblasting, ukutshiza, ukuhlolwa, indibano, ukupakisha, ukugqiba imveliso
Ukukhuselwa kwezityalo kunye nokondla: Ukwehla kobushushu bendalo kunokunyusa isivuno sezityalo ngokubonelela ngendawo efudumeleyo nenesondlo. Ikwathintela iziphumo zemozulu egqithisileyo, ekuvumela ukuba ukhule izityalo ezingakhuli kakuhle kwindawo yakho. Unokukhetha iziqhamo kunye nemifuno ebusika unyaka wonke.
Ilungele wonke umntu othanda igadi:Nokuba ungumgadi wegadi onamava okanye ukhula nje, le kit kit yegadi ikulungele. Ibhokisi yeentyatyambo yenza ukuba ukutyala imifuno, imifuno kunye nezityalo kube lula kwaye kungabikho xinzelelo. Sebenzisa i-greenhouse ukonwabela ukugcinwa okuphantsi, ukufudumala kunye nokufuma, kunye nezinambuzane nezilwanyana kude.
Kulula ukuhlangana:ekumgangatho ophezulu, ubungqina bokugquma, umgubo ogutyungelweyo, ibhedi yentsimbi eyenziwe ngesinyithi kunye nezihlanganisi zeplastiki zokuhlangana ngokulula. Umgangatho ophezulu we-PE greenhouse inshorensi inokufakwa ngokukhawuleza kwisakhelo sensimbi. Ukongeza, kukho imiphetho yokhuseleko ngaphezulu nasezantsi. Isigqubuthelo segreenhouse sinokugcinwa ngokulula kwingxowa yokugcina evaliweyo xa ingasetyenziswa.
Gcina imali: Ukunyuka kweendleko zemifuno kunye nemveliso yezolimo kwenza ukutya okunempilo kube yindlela ebizayo. Kodwa oku akunjalo. Ukuzikhulisela ukutya akulunganga kuphela emzimbeni nasengqondweni, kodwa nakwisipaji sakho. Qho ngonyaka ungathenga ezinye zeziqhamo ozithandayo, imifuno kunye nemifuno, ngexabiso elincinci kakhulu lokutyala!
Ukhuseleko oluBanzi:I-greenhouse ephathekayo yenzelwe ukukhusela izityalo zakho kunye nokuhlwayela imbewu kwiimeko zemozulu ezibi njengemvula, umoya kunye nekhephu. Inokudala imeko-bume efanelekileyo yokuba izityalo zakho zikhule ngokusempilweni kwaye kuyanceda ukwandisa ixesha lakho lokukhula!
Eco-Friendly izinto PE: Sisebenzisa okusingqongileyo-friendly Polyethylene (PE) .PE luhlobo yentlaka thermoplastic eyenziwe ethylene sombala, nto leyo ivumba, non-ityhefu, kwaye enokumelana aphantsi lobushushu ukumelana, uzinzo imichiza elungileyo, kunye asidi elungileyo kunye nokumelana kwealkali nokumelana .
Ulwakhiwo olomeleleyo:I-greenhouse isebenzisa umgangatho ophezulu kumbhobho wensimbi ye-tubular njengenkxaso yokugcina uzinzo kunye nendawo yokukhusela emoyeni. Kwakhona umnatha wenkxaso onzima uqinile ngokwaneleyo ukuba ungabamba iitreyi zembewu ezingaphezulu, izityalo ezinamanzi kunye nezinye izinto ezikhanyayo zokukhula kwezityalo.
Chwetheza Izitiya zeGadi
Igama lebrand QLYD
Isakhelo seMathiriyeli Isinyithi
Ukugqitywa kwesakhelo Powder Camera
Uphawu Ukudibanisa ngokulula, i-Eco Friendlt, Ubungqina beRodent, iPorta
Izinto eziphathekayo Ilaphu Poly ephothiweyo
Inombolo yomzekelo OEM
Uhlobo lwentsimbi Intsimbi
Uxinzelelo luphathwe Indalo
Igama Igadi ephathekayo 3 * 6 * 2 2mTunnel Polt Conservatory
Ubungakanani 300cm * 600cm * 220cm
Ukusetyenziswa Ukukhulisa izityalo kunye nemifuno ngalo lonke ixesha lonyaka
Umyalelo weSiko Yamkela
Hambisa Ixesha Iintsuku ezingama-30
Uhambo lwemoto yaselwandle ubukhulu becala isetyenziselwa ukuhambisa izithuthi ezingekho ezindleleni kunye neemoto zaselwandle. Ngokubeka i-ramp ngasemva kwesithuthi sothutho, imoto yaselunxwemeni inokungena ngokulula kwisithuthi ngothambeka, uqaphela ukuthuthwa okufanelekileyo kunye nokukhawuleza kunye nokulayisha kunye nokothula.
Jonga incwadana yemveliso yofakelo oluthile
Kwaye thumela i imeyile ukuya intengiso@ruiyitools.com
Umgangatho wempendulo yomthengi ulungile, uyasebenza kwaye ulula, umthamo wokuthwala umthwalo, ubomi benkonzo ende, indibano efanelekileyo
Isithuba seMvelaphi Shandong, China
Egqithileyo Uhambo lwemoto elunxwemeni
Okulandelayo: Isithuthi sokuzonwabisa sangaphandle
Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils, I-China i-PU Foam Isondo, DB Ivili, Isondo le-China PU, Ivili likaCaster, Umxube weKhonkrithi yase China,